I-CBD Enamanzi Encibilikayo: Konke okudingeka ukwazi - Ummeli Wezimboni Zensangu
I-CBD encibilikayo emanzini: Konke odinga ukukwazi
I-CBD encibilika emanzini ingaba ikusasa lemikhiqizo ye-cannabis.
Insangu yamukelwa kabanzi kulezi zinsuku. Izifundazwe eziningi zikubhalisile ngokomthetho ukusetshenziswa kwensangu, izifundazwe eziningi ziye zanquma ukuthi zizosebenzisa ngokusemthethweni lesi sitshalo futhi. Njengoba imboni ifinyelela phezulu kakhulu, manje kungaba yisikhathi esihle sokuba uqale ukucabanga ngokungena kulo mkhakha. Futhi enye yezinto zokuqala okudingeka uzibuze yona ukuthi: yimuphi umkhiqizo ozama ukuwuthengisa?
Ngokusho kweBDS Analytics, iziphuzo zingenye yemikhiqizo efunwa kakhulu yensangu. Phakathi kwale mikhiqizo, i-CBD encibilikiswa ngamanzi ingenye yezindlela ezintsha embonini. Kepha ingasiza kanjani i-nanotechnology ukudala okukhishwe kuziphuzo ze-cannabis?
Uyenza kanjani i-CBD encibilikayo emanzini
Okokuqala, uma ufuna ukwazi ukuthi i-nanotechnology isebenza kanjani kunqubo ye-cannabis, kufanele uhlole okuthunyelwe kwethu mayelana i-nanotechnology ku-cannabis.
Kulezi zinsuku, kunezinhlobo nje zemikhiqizo ye-CBD ongacabanga ngayo lapho emakethe. Okunye kokungezwa okusha kakhulu kulolu hlu yimikhiqizo ye-nano-CBD.
Kulabo abangazi, i-nanotechnology ngokuyisisekelo ifaka ukwehla cishe noma yini iye kubukhulu be "nanoscopic" kuyo yonke inqubo eyinkimbinkimbi. Umkhiqizo wokugcina uzoba yilokho ososayensi abakubiza ngokuthi "ama-nanoemulsions".
Ngokuncipha izinhlayiya nokuqhekeza amakhompiyutha e-cannabis, angangena ngokomzimba emzimbeni ngemifudlana yegazi futhi afinyelele esibindini ngokushesha kunokujwayelekile. INanotechnology ingasiza ekwakheni imikhiqizo emisha yomkhakha we-cannabis, futhi lokhu kuhlobene kakhulu nemvelo ye-CBD.
I-CBD inezimpawu ze-lipophilic, okusho ngokusobala ukuthi iyinhlanganisela esekwe uwoyela okungathi - njengoba ungathambisi- ayincibiliki emanzini. Njengoba imizimba yabantu ingamanzi angama-70%, inhlanganisela esuselwa ku-oyela inzima ukuthola i-cannabidiol. Kufana nokuthi uzama ukuthela uwoyela engilazini yamanzi.
Ngakho-ke, ngabe i-nanotechnology ihlangana ngani nalokhu? Yebo, lapho uhlukanisa i-cannabidiol ibe ama-nanoparticles, inamathela futhi ibophe kalula ngama-lipids nama-molecule wamanzi. Ngokuyinhloko lokhu kusho ukuthi ama-cannabinoids ancibilika emanzini, akwazi ukubophezela emanzini. Lokhu kuvumela ukumuncwa okusheshayo nokulula kwama-cannabinoids.
ISIQONDISO ESIQALILE: UMBUSO WOKUGCINA USDA KUHEMP
ISIQONDISO ESIQALILE: I-NANOTECHNOLOGY KU-CANABIS: YINI INZUZO YOKUSEBENZISA I-NANOTECHNOLOGY?
Ufuna ukufaka isicelo selayisense entsha ye-cannabis yaseMexico?
Kungani i-Water Soluble CBD iyinto enkulu?
Uma uzokwengeza i-cannabinoid esiphuzweni sakho kufanele incibilikiswe ngamanzi, ngoba isiphuzo sakho cishe sizoba ngamanzi-awuphuzi uwoyela, akunjalo - futhi, ikakhulukazi amanzi, ngakho-ke, uma uzobe uletha okuthile emzimbeni wakho, kufanele kuncibilike kuwo, ngakho-ke kungakwenza lokho okudingeka ukwenze futhi kufinyelele kuzo zonke izindawo okudingeka zikuthole.
Kuyavunywa, lena akuyona ukuphela kwendlela yokuthola ama-cannabinoids emzimbeni wakho. Isibonelo, ungayibhema, inkinga ngayo ukuthi kuzodingeka usebenzise amaphaphu akho, hhayi wonke umuntu ofuna ukukwenza lokho.
Okunye okufanele ukubheke ukuthi isisu sakho senziwa ukuphatha lezi zinto. Isisu sakho sinendlela yokulwa nezinto eziningi. Uma othile ethatha isinqumo sokubeka, ngokwesibonelo, amavithamini kumkhiqizo wakho we-cannabis bese uwudla, mhlawumbe ngeke kudingeke uye esibhedlela. Uma uyisebenzisa nganoma iyiphi enye indlela, ingahle ibe yingozi.
Izinzuzo ze-CBD encibilikiswa ngamanzi
Iyangena kalula. I-CBD engacutshungulwanga imvamisa inokutholakala kokutholakala kwe-4%, okusho ukuthi ungachitha kuze kufike kuma-96% we-CBD oyingenisayo. Kodwa-ke, i-CBD encibilikiswa ngamanzi inokutholakala kokungenani okungama-90%, okusho ngokuyisisekelo ukuthi uzothola okuningi ngokuncane.
Umthamo awuhambisani. Ngemikhiqizo eminingi ye-CBD, awukwazi ukwazi ukuthi udla imifino engakanani yonke imithamo oyinikiwe ngoba i-CBD ayihlanganisiwe ngokulinganayo. Kwenzeka into efanayo ngama-vape cartridges, ngoba awuholeli umthamo ofanayo njalo. I-CBD encibilikiswa ngamanzi ikuvumela ukuthi ulinganise umthamo ongaguquguquki ngaso sonke isikhathi, ngakho-ke i-cannabinoid ingena ngokungenakuqagela nangokuphumelelayo
Kuyinto elula. I-CBD encibilikiswa ngamanzi kulula ukuyithwala. Ungavele ukhiphe i-dropper bese uyixuba ekudleni noma eziphuzweni zakho noma kunini lapho ufuna khona, futhi uzothola umphumela ofanayo njalo.
Imikhiqizo ye-CBD encibilika kakhulu emanzini
Uma unentshisekelo yokwengeza i-CBD kokudla noma iziphuzo zakho, nansi eminye yemikhiqizo emihlanu efunwa kakhulu enikezela ngemikhiqizo ye-CBD encibilikiswa ngamanzi:
Ama-Big Sky Botanicals
Kukhona nezinkampani ezithile ezihlinzeka ngemishini nokwakhiwa kwamakhasimende azo ukuze zenze imikhiqizo ye-nano. Ungabheka ku- Ikhasi lewebhu le-Industrial Sonomechanics uma unesifiso sokwenza umkhiqizo wakho we-CBD oncibilikayo emanzini.
ISIQONDISO ESIQALILE: ILAYISENISI ELISHA LEBHIZINISI ELISHA LEYORK
ISIQONDISO ESIQALILE: UMSEBENZI WABASEBENZISI BABASEBENZI ABASHA ABASHA